Visio စျေး - အွန်လိုင်း VISIO ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Visio (VISIO)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Visio (VISIO) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Visio ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $22 780.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Visio တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Visio များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
VisioVISIO သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.211VisioVISIO သို့ ယူရိုEUR€0.18VisioVISIO သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.162VisioVISIO သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.194VisioVISIO သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.91VisioVISIO သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.34VisioVISIO သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč4.71VisioVISIO သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.794VisioVISIO သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.282VisioVISIO သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.296VisioVISIO သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$4.75VisioVISIO သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.64VisioVISIO သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.14VisioVISIO သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹15.78VisioVISIO သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.35.64VisioVISIO သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.29VisioVISIO သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.322VisioVISIO သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿6.58VisioVISIO သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.47VisioVISIO သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥22.53VisioVISIO သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩250.66VisioVISIO သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦80.44VisioVISIO သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽15.48VisioVISIO သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴5.84
VisioVISIO သို့ BitcoinBTC0.00002 VisioVISIO သို့ EthereumETH0.00056 VisioVISIO သို့ LitecoinLTC0.00392 VisioVISIO သို့ DigitalCashDASH0.00243 VisioVISIO သို့ MoneroXMR0.00245 VisioVISIO သို့ NxtNXT17.08 VisioVISIO သို့ Ethereum ClassicETC0.0313 VisioVISIO သို့ DogecoinDOGE63.6 VisioVISIO သို့ ZCashZEC0.0027 VisioVISIO သို့ BitsharesBTS8.1 VisioVISIO သို့ DigiByteDGB6.97 VisioVISIO သို့ RippleXRP0.753 VisioVISIO သို့ BitcoinDarkBTCD0.00741 VisioVISIO သို့ PeerCoinPPC0.725 VisioVISIO သို့ CraigsCoinCRAIG97.99 VisioVISIO သို့ BitstakeXBS9.17 VisioVISIO သို့ PayCoinXPY3.75 VisioVISIO သို့ ProsperCoinPRC26.98 VisioVISIO သို့ YbCoinYBC0.000116 VisioVISIO သို့ DarkKushDANK68.96 VisioVISIO သို့ GiveCoinGIVE465.48 VisioVISIO သို့ KoboCoinKOBO49 VisioVISIO သို့ DarkTokenDT0.195 VisioVISIO သို့ CETUS CoinCETI620.63